Diyaaradaha ugu Adeegga fiican Adduunka. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 Last updated Jun 26, 2017
Diyaaradaha adduunka ayaa ku kala horreeya adeegyada ay siiyaan rakaabka ku safra, waxa jira diyaarado magac iyo sumacad ku leh caalamka adeegga ay bixiyaan iyo diyaaradaha ay haystaan dartood. Waxaa jira dhacdooyin diyaaradaha qaarkood ay sammeeyeen oo farxad galiya dadka rakaabka ah iyo sidoo kale kuwa ka caraysiiya amaba gaara heer la dacweeyo.
Qoraalkaan waxa aan ku soo qaadanaynaa dhowr dhacdo oo loo aqoonsaday adeeg wanaag oo dhex maray qaar ka mid ah diyaaradaha dunida ugu caansan iyo rakaab ku safrayay. Waxaana ka mid ah:-
Sanadkii 2015-ka, Peggy Uhle ayaa raacday diyaaradda Southwest Airlines oo ka duulaysay Chicago kuna sii jeedday Ohio, Diyaaradda ayaa ka soo laabatay dhabbaha ay ka kacdo, ayada oo dib ugu soo laabatay albaabka ay rakaabku ka raacaan ee garoonka. Arrintaasi ma ahayn cillad farsamo laakin duuliyaha ayaa lagu wargeliyay in wiil 24 jir ah oo ay dhashay Peggy Uhle uu galay shil lana dhigay Isbitaalka Danver isaga oo aan ogaal lahayn.
Uhle waxaa laga soo dajiyay diyaaradda -ayada oo u malaynaysay in ay raacday diyaarad qalad ah- waxaana loo sheegay in ay wacdo ninkeeda. Diyaaraddu waxa ay sidoo kale u diyaarisay tikitka duulimaadkeeda ugu horreeya ee aadaya Danver ayaga oo aan u sheegin ayada.
“Waxa ay i geeyeen goob gaar ah oo aan diyaaradda ku sugo, boorsooyinkaygii ayay ku hagaajiyeen, aniga ayaa ay diyaaradda i saareen marka hore, waxa ay ii diyaariyeen qado aan cuno marka aan diyaaradda uga dego Danver” ayay tiri Uhle. Boorsooyinkedii waxa loogu qaaday hoteelka, si ay toos ugu aaddo isbitaalka uu wiilkeeda ku jiray, dhammaan adeeggaas loo qabtay Peggy Uhle wax lacag ah ugama qaadan shirkadda Southwest.
Sanadkii hore, diyaaradda Etihad ayaa qabsatay warbaahinta markii ay hakisay ama dib u dhigtay kicitaanka duulimaad ay uga tagaysay Manchester kuna jeeday Abu Dhabi si ay lamaane la socday ugu oggolaato in ay ka dagaan diyaaradda si u arkaan wiil ay awoowe u ahaayeen oo sakaraadayay.
Diyaradda oo ku cararaysay dhabbaha ay ka kacdo, ayaa ay lamaanuhu heleen farriin qoraaleed sheegeysa in wiilkooda la dhigay isbitaalka. Waxa ay u sheegeen shaqaalihii diyaaradda oo ku wargeliyay duuliyaha- oo diyaaraddii dib ugu soo celiyay albaabka dadku ka raacaan ee garoonka. Manchester Evening News ayaa warisay in shaqaalaha diyaaraddu ay sii diyaariyeen baabuurkii lamaanaha oo sugayay inta ay ka soo degayaan diyaaradda si uu u geeyo isticbaalka. Wiilkoodii waxa uu dhintay maalintii xigtay – marka ay waqti la qaateen kaddib.
Bishii hore, Diyaaradda Turkish Airlines ayaa iyaduna warbaabinta qabsatay markii shaqaalaha diyaaraddu ay caawiyeen hooyo canug ku dhex deshay diyaaradda oo hawada ku jirta xilli ay ka soo duushay Guinea. Canugga ayaa ku dhashay diyaaradda oo hawada ku jirta 42,000 feet, hooyadii iyo canuggeeda oo caafimaad qaba ayaa ka dagay Burkina Faso. Diyaaradda ayaa kaddib Twitterka ugu hambalyaysay boqoradda cusub ee dhalatay.
Bishii December ee hore, Saddex haween ah oo dib ugu laabanayay London kana tagayay Gibraltar ayaa ka war helay in ay yihiin rakaabka kaliya ee duulimaadkooda, markii dhammaan dadkii kale ay doorteen in loo beddelo duulimaad horreeya oo ay ku laataan. Haweenkan saddexda ah oo bixiyay £80 oo tikitka caadiga (economic) ah, ayaa goostay in ay iska raacaan duulimaadkooda oo dib loo dhigay saddex saacadood. Shaqaalaha diyaaradda ayaa u beddelay haweenkaan qeybta ganacsiga (business class) waxa ayna kula dabbaal degeen qamro (champagne), saddex jeer oo casho ah iyo sawir loo oggolaadeen in ay galaan xilligii ay dagaysay diyaaraddu. Waxa ay sheegeen in loo maamusay si heer sare ah.
Diyaaradda Qatar laguma qiimeeyo hal dhacdo oo ay macaamiil u sammeysay maxaa yeelay waxa ay ku jirtaa heer sare ee dhinaca adeegga – maaddaama dhowr jeer oo ay ugu dambeysay bishii November ee sanadkii hore loogu codeeyay diyaaradda ugu adeegga fiican dunida. Waxaase muhiim ah, in bishii hore ay billowday adeeg ay rakaabku kula soconayaan ama ku kormeerayaan (track) boorsooyinkooda, adeeggaan ayaa u oggolaanaya rakaabka in ay la socdaan halka boorsadoodu ay taallo inta u dhaxaysa marka looga qaado garoonka ilaa marka looga soo celinayo ayaga oo isticmaalaya tiknoolojiyad. Waa adeeggii ugu horreeyay ee shirkad diyaaradeed isticmaasho dunida.
W.Tarjumay: Yuusuf Sheikh Ciise
Qoraa iyo Diblomaasi
Yusuf Sh Isse-Qoraa